THBP: ရခိုင်သမတိ ဇာခါ မှ အလှဆင်ကတ်ပါဖို.လေး???
ရခိုင်သမတိ ဇာခါ မှ အလှဆင်ကတ်ပါဖို.လေး???
အကျွန်ရို. ရခိုင်သမတိ ဇာခါ မှ အလှဆင်ကတ်ပါဖို.လေး။
ရခိုင်သမတိ ဇာခါမှ ဖက်ရှင်ဆိုစော်ကို နားလည်ပါဖို.လေး။
အကျွန်ရို.အချေခါ တခါလေ့ မိပ်ကပ်မလိမ်းပါ။ သနပ်ခါးရာလိမ်းရေ။ မိတ်ကပ်ကို လိမ်းရဖို.ပြောရေ အိမ်မှာတောင်မရှိ။ အပျိုချေဖြစ်ခါ ပရိုမီနာ လောက် အာချီလောက် နိမ်းရကေ ကောင်းဟုတ်ဗျယ်ထင်ခရေ။ မိတ်ကပ်လိမ်းရဖို.စော်ကိုလေ့ ရှက်တေ။ လွလီလွလွ မမချေတိရာ နိမ်းရေ၊ မိတ်ကပ်နိမ်းနီဗျယ်ထော လင်လိုနီဗျယ်လား နဲ.ပင် အိမ်ကလူကြီးတိ ပမှာ အပြောခံရရေ။ ကိုယ်က အသားချေကလေ့ မည်းနဲ.ဆိုခါ မိတ်ကပ်နဲ. နှုတ်ခမ်းဆိုးတင်လိုက်ကေပင် ကုလားမပိုင်ဂါနဲ.ပင် အပြောခံရရေ။ လှချင် ပချင်ရေ စိတ်ကို ချိုးနှိမ်ခံရရေ။ လက်ခံပါရေ။ ဆယ်တန်းထိ၊ ဇကုန် တက္ကသိုလ်ထိ။ မဖြစ်သင့်စော် မဖြစ်အောင်လို. တားသင့်စော်ကို တားရေလို.။ ယဂေလေ့သင့် မမချေတိကို နှုတ်ခမ်းဆိုးချေ ဆိုးကေပငါ လင်လိုနီဗျယ်လား ဆိုရေ အပြောမျိုးနဲ. တားစော် မှားရေလို.ထင်ပါရေ။ ဆင်သင့်ရေ အချိန်မှာ ဆင်ခွင့်ပီးရဖို.။ ပြင်သင့်ရေ အချိန်မှာ ပြင်ခွင့်ပီးရဖို.။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆင်ဆင်ပြင်ပြင် လန်းလန်းဆန်းဆန်း နီတတ်အောင်တောင်မှ သင်ပီးရဖို.။
ယဂေ အဂုဝါ တက္ကသိုလ်လေ့ ပြီးဗျယ်။ အလုပ်လေ့ ဝင်ဗျယ်။ ယဂေလေ့ သင့်မဆင်တတ် မပြင်တတ် စော်မမချေတိ ကောင်းအများကြီးပါဂါ။ နိုင်ငံခြားကို ရောက်ကေလေ့ မဆင်မပြင် မဝတ်တတ် မစားတတ် (မဝတ်ချင် မစားချင်လို. ရိုးရိုးချေလို. အကျွန်မယူဆပါ) ကားရီးကားရား ဇာဖြစ်လို. ဝတ်ကတ်ပါသိလေ။ ကိုယ့်စိတ်က ရခိုင်သမချေ တယောက် တော်စော် လှစော်တွိချင်ပါရေ။ တချို.က နင်ရို.မှာ Natural Beauty ရှိပြီးသား တခုလေ့ Artificial တိကူဖို.မလိုလို. ပြောကတ်ပါလိမ့်မေ။ မှတ်ထားပါ ယင်းပိုင်ပြောစော် မနာလိုလို.။ နဂိုယလောက်လှကေ သင့်တင့်ရေမိပ်ကပ်တိ ပျင်လိုက်ကေ ဘလောက် လှလီပါဖို.လေး။ မြန်မာဝတ်စုံပင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဂျင်းဘောင်းဘီ တီရှပ်ပင်ဖြစ်ဖြစ် လိုက်လိုက်ဖက်ဖက် သင့်တော်ရေ အဆင်အသွီးကို ဝတ်တတ်ကေ ဇာလောက်လှလီပါဖို.လေး။ Natural Beauty မရှိကေလေ့သင့် ကိုယ်နဲ.လိုက်ဖက်တေ မိတ်ကပ်နဲ. တော်ရုံသင့်ရုံ ပြင်ကေ နဂိုရုပ်ထက် အများကြီးထွက်ပါရေ။ ကိုယ့်မှာ Confidence အများကြီးပိုရှိရေ။ ဇာတ်သမပိုင် မိတ်ကပ်တတောင်လောက် တင်ဖို.ပြောနီစော် မဟုတ်ပါ။
ရခိုင်သမတိ မဝတ်တတ် မစားတတ်ကေ ကိစ္စမှာ ရခိုင်သားတိစနက်အများကြီးပါပါရေ။ ရခိုင်သားတိမှာက ကုလားစိတ်ပိုင်ပါဗျယ်။ ဘူမခြုပ်ခိုင်းစော်ရာ ရှိပါဖို.။ Ideal မယားဆိုစော် ခဲဝါဥဖွေးလို.နိမ်းလို. ပါတိတ်ချေဝတ်ပျယ် လင်လာစော် စောင့် ၊ ဆဲကေခံ ခိုင်းကေလုပ်ကေ မယားကောင်းလို. သတ်မှတ်ပါရေ။ ယင်းချင့်တောင်မက ဝတ်စော်စားစော် မမချေရှိကေ လွမလို. ကဲ့ရဲ့ရှုံ.ချတတ်သိရေ။ အဂုတော့ အယင်ကလောက် မဆိုးပါဗျယ်။
နိုင်ငံခြားကိုရောက်လို. အတိုဝတ်ရဖို. အပြတ်ဝတ်ရဖို. ဘီကီနီဝတ်ရဖို.လို. မပြောပါ။ ယကေလေ့ ဝတ်ကေ ဇာဖြစ်လေလို. မီးချင်ပါယင့်။ နွီရာသီမှာ အတိုဝတ်စော်အဆန်းပါလား။ ကမ်းခြေလားလို. ဘီကီနီဝတ်စော် အဆန်းပါလား။ အေမှာ ၇ီကူးကန်လားပြီးကေ ထမီရင်ကန်.လို. ၇ီချိုးမေ ဆိုလို. ရပါလား။ အချိန်နဲ.အခါနဲ. လိုက်ပြီးကေ ဝတ်တတ်ကေ ကျီဗျယ်လို. ထင်ပါရေ။ ယဂေလေ့ ငါနိုင်ငံခြားက ပြန်လာရေဟေးဆိုပြီး စစ်တွေ ပွိုင့်မှာ ဘီကီနီနဲ. ပြီးနီကေ မျှော်စင်ထက်ကနီ တိုးချတောင် ခံရဖို.သိ။ အချိန်အခါသင့်ကေလေ့သင့် နေရာ သင့်လာ မသင့်လာကြည့်ရပါသိရေ။ အဂုက ဘီကီနီထားလို. ကြိုးတချောင်း အင်းကျီဝတ်ကေပင် အဘာလေး ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကိုသတိရကတ်ပါ၊ ရိုးရာကိုသတိရကတ်ပါ။ မမချေတိ မလော်လီကတ်ပါကေ့ နဲ.ပင် ကြားရပါရေ။ ခေတ်ဆိုစော်ကို မိနီကတ်ပါရေဂါ။
ရိုးရာကို တချိန်လုံး စွဲနီလို.မရပါ။ မျက်စိဖွင့်ကြည့်ပါ။ တကမ္ဘာလုံးပြောင်းလဲနီစော်ပါ။ လူမျိုးစုတိုင်း ကြုံနီရစော် ကိစ္စပါရာ။ သင့်တော်ရေပိုင်လိုက်ပြီးကေ Adept လုပ်ဖို.အချိန်လို.ထင်ပါရေ။ ငါရခိုင်သား ရခိုင်လူမျိုးတိုးတက်အောင်ကြိုးစားမေ နင်ရို.ရခိုင်သမတိတခုလေ့ လုပ်ဖို.မလို အိမ်မှာနီကတ် အပြင်မထွက်ကေ့ဆိုစော် အတွေးမျိုးထက် ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန် ရခိုင်သားနဲ. ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ရေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိရေ၊ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာရေ တက်ကြွရေ ရခိုင်သမတိကို လက်တွဲခေါ်ရပါဖို.မဟုတ်ပါလာ။ အေရခိုင်သမလှရေ၊ ရခိုင်သမချေမိုက်တေထော၊ ဝတ်တတ်စားတတ် ပြင်တတ်ဆင်တတ်တေ တော်ရေ ဆိုကေ ချီးကျူး ဂုဏ်ယူနိုင်ရဖို. မဟုတ်ပါလား။ အဂုက ဆန်.ကျင်ဘက်ပါဂါ။
အဂုတော့ ပြင်ပြင်ဆင်ဆင် ဝတ်တတ်စားတတ်တေ ရခိုင်သမချေတိ များလားစော်ကိုတွိလို. ဝမ်းသာရပါရေ။ ထော ငရို.ရခိုင်သမယေ တပျင်းမိုက်တေလို. ပြောလို.ရပါရေ။ ကျန်စော် တော်ရိတော်ရော် အလှအပကို စိတ်မဝင်စား ဖြစ်တေပိုင် ဝတ်မေ အရေးမကြီးလို. ထင်ရေ ရခိုင်သမချေတိကိုလေ့ ပြောချင်ပါရေ။ မိတ်ကပ် ၅ မိနစ်လောက် အချိန်ယူပြီးပြင်ဖို.မခက်ပါ။ ဖေ့သာလေ့မကုန်ပါ။ အဝတ်အစားကို တုံးတိကြီးမဟုတ်ပဲနဲ. လိုက်ဖက်စော်ကို တွဲလို.ဝတ်ဖို. မခက်ပါ။ အကျွန်ရို.စော် နိုင်ငံခြားမှာ ယောက်ျားတိနဲ. ရင်ဘောင်တန်းပြီးကေ လုပ်နီရေ Professional , Mature ဖြစ်တေ မမချေတိပါ။ လူကြားသူကြားမှာ Impressed ဖြစ်အောင် ဝတ်တတ်စားတတ်ဖို. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြည့်ကောင်းအောင်ပြင်တတ်ဖို. လိုကို လိုပါရေ။
အေဘလော့ပို.စ်ကို ရွီးချင်စော် နှစ်နဲ.ချီနီပါဗျယ်။ အဂုမှရွီးဖြစ်တေ။ နောက်ထပ်လေ့ အကျွန်ရွီးဖို.စိုင်းစားထားစော်ရှိပါရေ။ အဝတ်အစားအကြောင်းပါ။ ကိုယ်ယလောက်ထိ မသိကေလေ့သင့်ပြိန်းတောမှာ ဓါးက ကြည့်ပါမေဒေ။ ရခိုင်ဖက်ရှင် ဘလော့ဂါလို.မရှိသိပါဂါ။ မမချေတိထဲက တစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက် ထပြီးလုပ်ကေ ကောင်းပါဖို.။ မမချေတိကို ဘလော့မှာများများ Active ဖြစ်စီချင်ပါရေ။ အစားအသောက်အကြောင်းကို အမြဲတမ်းရွီးနီလို.မရခါ နည်းနည်းပါးပါး တော့ပစ် ပြောင်းကြည့်စော်ပါ။ အလုပ်များနီလို. ထိုလုပ်စား အေလုပ်စား လုပ်လို.မရခါ နောက်ထပ် ရခိုင်စာ ပို.စ်က မတင်ဖြစ်ဖြစ်နီပါရေ။ မကြာခင် တင်နိုင်ဖို.ထင်ပါယင့်။း)
This entry was posted on 1:23 PM You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.